काठमाडौंमा ट्याक्सी भित्र चढेका युवायुवतीले जे गरे….. – Tufan Media News
२८ पुष २०७७, मंगलवार १४:१४
कुनै ट्याक्सी चालक हेरेरै चित्त बुझाउने गरेको भेटियो, कोहीले भने थ’र्का’एर भ’गा’उने गरेको भेटियो भने केही चालकले ‘जे सुकै गरुन्’ भनेर वास्तै नगर्ने पनि भेटियो।चालक सापकोटाकै अर्को अनुभव पनि त्यस्तै रहेछ। ठाउँ पनि दरबारमार्ग नै। साँझतिर २ जना केटी र ३ जना केटा ट्याक्सीमा आए। एकजना केटा चालकसँगै बसे। ४ जना पछाडि बसे। केटीहरु केटाको काखमा बसेका थिए।पछाडी अर्कै खालको आवाज आएपछि हेर्दा त उनीहरु यौ’ न स’म्प’र्कमा लि’न रै’छन्। केटाको संख्या धेरै भएकाले उनले केही बोलेनन्। भनेको ठाउँमा लगेर झा’रि’दिएँ। पछाडि बसेका केटाहरु पा’इन्ट मि’लाउँदै उ’त्रिए।
उनीहरुको उमेर त्यस्तै १७–१८ थियो होला। ट्याक्सी बागबजारबाट कमल पोखरी हुँदै अगाडि बढ्दै थियो। पछाडि बसेकाहरु छा’डा बो’ले’र है’रा’न। के गरिरहेका छन् भनेर उनले चालकसँगै सीसामा हेरे। पछाडि त दुवैजना पूरै क’प’डा खो’ले’र च’लि’रा रैछन्।
ज्ञानेश्वर पुग्न लाग्दा त ट्याक्सीमै ह’नि’मु’न मनाउने तयारी पो गरे। उनले ट्याक्सी रोकेर थ’र्का’ए’छ’न्। उनीहरु के थ’र्कि’न्थे। उल्टै ‘ट्याक्सी चालक होस् ट्याक्सी चला, धेरै न’करा’ भनेर थ’र्का’ए।माया–प्रेमका कुरा गर्दै थिए। म तिमीलाई यति माया गर्छु, उति माया गर्छु भन्दै थिए। यसो साइड बीचको सिसाबाट हेरेँ। दुवै कि’स खाँ’दै म’डा’रि’इर’हे’का रहेछन्।
उनले ‘दाइ तपाईंले के गर्नुभएको यस्तो’ भनेँ।
उनीहरुले ‘तँलाई पैसा दिएकै छ। पैसा तिरेपछि ट्याक्सी हाम्रै हुन्छ’ पो भने। उनले लाजिम्पाट पु-याएर फर्किए। एक जोडी म’स्किँ’दै, जि’स्किँ’दै ट्याक्सी भएको ठाउँमा आएर गोकर्ण जाऊँ न भने। उनीहरु गफमै मस्त थिए। गफ सुन्नै ला’ज लाग्नेखालको थियो रे। ‘अस्ति क’त्ति’को म’ज्जा’ आ’यो’ केटाले सोध्यो। ‘मलाई त निकै दु’ख्यो नि’ केटीले जवाफ फर्काइन्। केटाले आज रमाइलो गर्नुपर्छ है भने।
केही भने अ’चम्म’कै यात्रु पनि भेटिने रहेछन्। उनको यस्तै अनुभव छ। चाबहिल चोकमा बिहान ३ बजेतिर एउटा मान्छे आयो। दाइ म तपाईंको ट्याक्सीमा अएर सुत्छु भन्यो। बिहान ७ बजेतिर उठेर १५ सय तिरेर गयो।‘नाइटमा भेटिने अधिकांश यात्रु यस्तै हुन्छन्। प्रायः म’स्ती गर्न नै हिँडेका भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘८ वर्षको अनुभवमा आ’पत’विप’तमा परेका त कमै भेटिएका छन्।’
केही यात्रु भने वि’वा’द भएपछि ट्याक्सीभित्रै हा’ना’हा’न गर्ने पनि भेटिने रहेछन्।
ट्याक्सी चालक गणेश खड्काका अनुसार प्रायः डान्सबार र डिस्कोतिरबाट आएका यात्रु आ–आफैँ झ’ग’डा गर्ने रहेछन्। त्योसित किन टाँ’सि’एर ना’चे’को, अर्कोसँग किन बोलेको भनेर झ’ग’डा गर्ने रहेछन्।‘आफ्नो गर्लफ्रेण्ड अर्कोसँग नाचिन्, कुरा गरिन् भने झ’ग’डा पर्ने रहेछ,’ उनले भने‘ ‘ट्याक्सी चढ्दा ठा’स्सठु’स्स गरेर चढ्छन्। वि’वा’द हुँदै जान्छ। कोही गा’ली’ मा’त्र गर्छन्, कोही त हा’ना’हा’नै ग’र्छन्।’
ट्याक्सी चालक अमृत सापकोटाको अनुभवमा प्रायः जसो भारतीय यात्रुले ‘ल’ड्की मि’लेका ‘क्या’ भन्दै है’रा’न बनाउँछन्। उनीहरुले केटी मि’लाइ’दे’ऊ पैसा दिन्छु भनेर है’रा’न बनाउने गरेको उनले बताए।‘प्रायः भारतीय पर्यटकले ट्याक्सी चालकलाई यौ’ ‘नकर्मीको द’लालै सम्झँदा रहेछन्,’ सापकोटाले भने, ‘जो भेटिए पनि दाइ ल’ड्की’ मि’ला’इदे’ऊ न भन्ने मात्र भेटिन्छन्। ल’ड्की’स’ड्की थाहा छैन भन्दा पत्याउँदैनन्। ह’प्का’उनै’पर्छ।’ भारतीय पर्यटक मात्रै हैन, यतैतिरका आन्तरिक पर्यटकले पनि यस्तै गरी है’रा’न बनाउने रहेछन्।
मैतिदेवी चोकमा यात्रु कुरेर बसेका ट्याक्सी चालक प्रेम दुलालका अनुसार प्रायः ठमेलतिर आउने यतैका नेपालीले पनि गुरुजीसँग केटीको क’न्ट्रया’क्ट होला भनेर सोध्छन्। छैन भन्दा पत्याउँदै पत्याउँदैनन्।‘राति ११ बजेतिर बसपार्कमा २ जना केटा आएर ठमेल जाऊँ भने। २ सय ५० दिन्छु भने। म तयार भएँ,’ दलालले भने‘ ‘ठमेलतिर पुगेपछि गुरुजीको कन्ट्या’कमा केटीहरु होलान् भनेर सोधे। त्यस्ता खालका केटीहरु छैनन् भनेँ। ट्याक्सी रोक्नुस् हामी अर्को ट्याक्सीमा जान्छौ भनेर ओर्लिए।’ शुक्रवार साप्ताहिकबाट
काठमाडौंमा ट्याक्सी चढ्नलाई गोजी मोटो हुनुपर्छ । मध्यमवर्गीय नेपालीहरु हत्पत्ति ट्याक्सी चढ्ने आँट गर्दैनन् । त्यसो त ठगिने उच्च सम्भावनाका कारण पैसावालहरु पनि ट्याक्सीमा यात्रा गर्न नपरोस भन्ठान्छन् ।तर, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा यति सकसपूर्ण छ कि कहिलेकाहीँ ट्याक्सी चढ्ने वाध्यता परिहाल्छ । ट्याक्सी प्रयोग गर्नेहरुको सख्या बढ्दो रहेकाले उपत्यकालगायत मुख्य शहरहरूमा ट्याक्सी व्यवसाय फस्टाएको छ । ट्याक्सी व्यवसाय गर्न चाहनेको सख्या जति धेरै ट्याक्सी यात्रुहरुका गुनासा पनि उति धेरै छन् ।
काठमाडौंमा ट्याक्सी चाहियो ? अब मोबाइल एपबाटै बोलाउनुहोस् ।
भनेको समयमा ट्याक्सी नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? काठमाडौंमा आफू भएकै ठाउँमा भन्ने वित्तिकै ट्याक्सी पाइँदैन । अझ मिटरमै गुड्ने ट्याक्सी पाउन त झन् गाह्रो ।तर अब चिन्ता लिनुपर्दैन् । एउटा मोबाइल एप मोबाइलमा डाउनलोड गरिराख्नुहोस् मौकामा काम लाग्न सक्छ । अन्भर स्मार्ट ट्याक्सी नामक एपबाट अब तपाईले सजिलै काठमाडौंमा ट्याक्सी बुक गर्न सक्नुहुन्छ । अन्भर संस्थापकका अनुसार सो एपमा जोडिएका २ सय ट्क्यासीमा जिपिएस प्रविधि जडान गरिएको छ ।